Violet Mkpa mmanụ E127 | AromaEasy N'ogbe mmanụ ndị dị mkpa
Mbido / shop / All Products
gosiri 4.82 nke 5 dabeere na 28 ahịa Fim
Violet Mkpa mmanụ E127 buru ibu
Ahịa ego 2.28 (USD)
SKU: E127 Categories: 100% Mkpa Mkpa Mmanụ, All Products
N'ogbe Osisi Ahia Ahia Mkpa Mkpa
Akwụkwọ nyocha (COA) download
Nka na ụzụ Data Sheet (TDS) download
Nkwupụta nke Allergens (DOA) download
Nwere ndị mejupụtara okike:
mmanya na-egbu egbu,
Ọcha na-esi ísì ụtọ
Na-ebelata urukpo na-ebu isi na mmiri, mmiri na-adịghị mma
Site na karama ahụ: dị nro, nke ụrọ na okpukpo ahịhịa
Violet na - enyere aka belata nsogbu iku ume, nyocha dịkwa ka ị na - akwado ihe ahụ.
Jiri onye na-enye ihe na-eme ihe na-eme ka isi gị dị ụtọ n ’mmanụ dị mkpa n’ime ụlọ gị.
Ihe ndi ozo na-adigide, nke sayensi na-akwado
Ọ bụghị mmanụ niile dị mkpa ka emepụtara. Anyị anaghị ama ụma mebie site na ịtinye ihe sịntetik dị ọnụ ala, ihe mmetọ ma ọ bụ nzacha, ma ọ bụ site na iji usoro mmepụta ihe na-adịghị mma. Site na usoro nhọta nke ndị na-ebubata ngwa ahịa na ntinye anyị na-agbanwe agbanwe maka nnwale dị mma, anyị na-ekwe nkwa na ngwaahịa ọ bụla anyị na-ere bụ 100% dị ọcha ma bụrụ eziokwu.
Anyị na-adabere na mmekọrịta anyị na onye na-ebugharị / soplaya na ihe ọmụma banyere omume ọma ha iji hụ na ngwaahịa ahụ enweghị ọgwụ ahụhụ na ịkwa iko.
N'ụwa niile Mbupu
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-abụghị MLM ma anyị na-ere ndị ahịa anyị ihe karịrị mba 220 gburugburu ụwa na ntanetị. Anyị ahịa bụ mgbe N'ogbe, n'ihi na onye ọ bụla ahịa; Needkwesighi ịdebanye aha ma ọ bụ bụrụ onye otu iji jiri ọnụahịa ahịa anyị. Anyị na-enyekwa nkwado nkwado dị ukwuu maka mbupu mba ofesi.
gosiri 4.87 si 5
Maka ozi kachasị ọhụrụ, biko soro anyị Instagram & Facebook.
28 reviews maka Osisi mkpịsị osisi mkpa E127
Dabere na 28 nyocha
kasị nso nso Ugbu a Enyemaka
Tinye a nyochaa
ME - Nwere ike 5, 2021
Ngwaahịa dị mma na nnyefe ọsọ ọsọ
Mariri - Nwere ike 5, 2021
Odi ezigbo mma !!
Nkparịta ụka 1963 - Nwere ike 4, 2021
Nke a bụ anwansi mmiri mmiri. Mgbe ikpere m na -egbu mgbu. Naanị tee ya. Na -enye m ahụ efe. Nwee ebe mgbu na -egbu mgbu. Jiri ha kwa ụbọchị. Agaghị achọ ọgwụ mgbu. Isi na -esi ike mana ọ bụghị ihe na -atọ ụtọ. Na -atụ fir maka otu afọ ma ọ na -enyere m aka kwa ụbọchị!
Deena - Nwere ike 4, 2021
M hụrụ n'anya price na senti. Enweghị m mmasị na ọ naghị edepụta ihe ndị ọzọ dị ka mmanụ ụgbọelu. Isi na-esi ísì ụtọ dị mkpụmkpụ. N'agbanyeghị nke a, m ka ga-azụta ihe ọzọ n'ọdịnihu.
NGAN - Nwere ike 2, 2021
Mmanụ a dị mkpa na -esi ísì ọma ma ọ bụrụ na -amasị gị isi nke okooko osisi oroma oroma ọhụrụ. Echetara ma gardenia na freesia.
Ndo, ọ nwebeghị nyocha ọ dabara na nhọrọ gị ugbu a